News - Development na Industrialization nke Metal mpempe akwụkwọ N'ihi Ọdụdọ Njikọ
Development Na Industrialization Of Metal mpempe akwụkwọ N'ihi Ọdụdọ Njikọ
Na Feb.25,2020, Ngalaba Ahịa na Jitai Electronics Co., Ltd haziri nzukọ nzukọ ahịa oge niile, Na nzukọ a, anyị kpebiri mmepe njikọ eletriki ngwa ngwa iji nye ahịa ụwa niile ndị njikọ eletriki nke mma ka mma.
Ngalaba nyocha na mmepe anyị kwuru na ejiri njikọ njikọ eletriki na mbara ala / ebe ikuku, n'ihi ihe achọrọ maka obere elektrọnik, obere ngwongwo aluminom bụ ihe zuru oke na ihe zuru oke maka nzukọ ahụ. na ezi dissip na tozuru okè technology na-adịghị ike kwa elu na ationgha na-erughị na-eri na ationgha bụ adabara uka ojiji, nke mere na anyị ụlọ ọrụ ipuiche otu ekwekọghị eletriki njikọ ya.
Anyị enwetala ihe ngwọta maka isi ike ọrụ aka anọ site na mbọ ọtụtụ afọ.
1.Expansion coefficient nwere ike dakọtara aluminom alloy ngwugwu na nhọrọ nke ihe maka akara na iko insulators.
2.Small iko mkpuchi oghere mere ka o sie ike na-echepụta iko insulators na huu si dayameta ekwekọghị ndidi nakwa dị ka elu dakọtara na ojiji chọrọ.
3.Small lead pitch, thermal mgbasa ọnụọgụ n'etiti ngwugwu na-edu ndú bụ nnukwu na imewe nke mode dị elu.
4.The electroplating technology nke oghere edu ndú na obere iko oghere
Mmepe nke njikọ eletriki nke alloy Aluminium ga-emepe ahịa maka ụlọ ọrụ anyị ka ọ sonyere mgbakọ ngwugwu ngwakọta nke njikọ eletriki akụkụ anọ nke mirco ma melite ọnọdụ na imewe na imepụta ihe na ụlọ ọrụ ugbu a melite ọkwa nyocha sayensị na ngwugwu njikọ ọkụ eletrik mee nkwadebe teknụzụ maka mmepe teknụzụ n'ọkwa dị elu na futher.
Jitai Electronics Co., Ltd na-erube isi na-enweghị ngwụcha ka anyị wee ghara ịkwụsị ịga n'ihu, anyị na-enye oge niile iji nye ndị ahịa azịza dị egwu dị ka ntụzịaka anyị nke mgbalị.Via na-enweghị njedebe, anyị ga-abụ onye ndu n'ọhịa eletrik.